Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Somaliland iyo dibadbaxa ka socda (Daawo) - Caasimada Online
Home Somaliland Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Somaliland iyo dibadbaxa ka socda (Daawo)
Hargeysa (Caasimada Online) – Xaaladda guud ee magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland ayaa maanta kacsan, waxaana ka billowday didbad-bax ballaaran oo ay dhigayaan xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda xukuumadda Muuse Biixi Cabdi.
Dibad-baxa ayaa waxaa hoggaaminaya mas’uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo UCID, waxaana kala qeyb-galayey dadweyne kala duwan oo taageerayaal ah.
Sidoo kale waxaa magaalada lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Somaliland oo wada dhaq-dhaqaaqyo ka dhan ah dibad-baxayaasha, iyada oo rasaas adeegsanaya.
Wararka ayaa sheegaya in illaa dhowr qof oo mas’uuliyiin ay ku jiraan ay dhaawacyo soo gaareen, waxaana ka mid ah xildhibaan Barkhad Baatuun, Muniir Axmed Cigaal iyo xubno kale oo ka mid ah mucaaradka.
Ciidamada ayaa sidoo kale kala eryaya dibad-baxayaasha oo ku qaylinaya erayo ka dhan ah Madaxweynaha talada haya Muuse Biixi Cabdi.
Dhinaca kale ciidamada Somaliland ayaa xir-xiray qaar ka mid ah mas’uuliyiinta dibadbaxa ka qayb-galaya, waxaana ka mid ah Cabdullaahi Maxamed Daahir Cakuse oo ah Wasiirkii hore ee Warfaafinta Somaliland, sida ay ku warramayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Musharaxa xisbiga Wadani, Cabdiraxmaan Cirro oo hadal siiyey warbaahinta ayaa sheegay in dibad-baxa uu bilaabmay, isla-markaana xoogiisa uu dhacayo maalinta Sabtida ah.
“Mudaharaadku waxa uu si rasmi ah u bilaabmayaa Maalinta Sabtida ah Lixda Gobol &iyo Degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland. Saaka annaga oo dooneyna in aan dadka siinno wacyigelin ayaa naloo adeegsaday Xabad nool, sunta gaaska ah, xadhig iyo Jidh-dil oo sharci darro iyo kelitalisnimo ah,” ayuu yiri musharrax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro
Somaliland ayaa waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay doorashada hoggaanka maamulkaasi, waxaana isku haya xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda Muuse Biixi Cabdi.